Muenzaniso Simba Lumen DIM Saizi yechigadzirwa Kucheka
LP-DL12EC01-Y 12W 880-1020LM N ∅166x25mm 5105-150mm
LP-DL18EC01-Y 18W 1450-1530LM N ∅219x25mm 50150-210mm
Paunotarisa mwenje unozivikanwa kwazvo weUS mumusika, vatengi vazhinji vanofanirwa kutaura nezve idiki yakatungamirwa paneli mwenje. Nekudaro, tetepa haina kukwana mazuva ano. Vazhinji uye vazhinji vatengi varikutsvaga anoshanduka maburi maseru akatungamirwa pasi mwenje.
Cheka—Iwe unofanirwa kunzwa kutemwa nemusoro kana saizi yekumisikidza isingaenderane neyakagadziriswa chigadzirwa. Vatengi vanofanirwa kutambisa nguva yakawanda uye kubhadhara mari yekuwedzera yebasa. Yedu nyowani dhizaini yemukati yakatungamira mwenje mwenje inogona kugadzirisa iyo saizi saizi ine hombe renji. Semuenzaniso, gomba saizi renji ye3W inogona kusvika 25mm, 18W inogona kuva 60mm. Hapana chikonzero chekushushikana nezve kukanganisa kwekuisa saizi zvakare.
Paramendi mukana -CRI uye danda kona inofungidzirwa kana ikashandiswa mukati mekutenderera, CRI yeiyi inogadziriswa yakatungamirwa mwenje inogona kusvika makumi masere mushure mekuyedzwa nehunyanzvi hwakasanganiswa bhora. Iyo danda kona yakatenderedza 120 degrees mushure mekutariswa nekamuri yerima. Kana ukabhidha purojekiti, IES faira zvakare rinogona kupihwa kuitira kuratidza iwo mwenje mhedzisiro.
Chero zvinoda, pls inzwa wakasununguka kuti utaure nesu uye uwane quote nhasi!
Pashure: New Surface Yakakwira Pasi Chiedza
Zvadaro: Yakakwira Simba 50watt IP65 Pasi Chiedza
Akatungamira Pasi Chiedza Chekutengesa
Plastic akatungamirira Downlight
Yakagadziriswa Slim Panel Chiedza
BX COB Pasi Chiedza
Nyowani Yakagadziriswa Inogadziriswa Downlight
Inosvikika ES Pasi Chiedza
Zvehupfumi EW Pasi Chiedza